သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် ရထားမှတဆင့်ဖြတ်သန်း တစ်နေ့တာအတွက်, then the lockers are the way to go. All of these stations have luggage checking services, အချို့သော Self-ဝန်ဆောင်မှု.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံရှိလက်ဝဲအိတ်များနှင့်၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှာရမည်နည်း” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သငျသညျဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. တစ်ဦးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည် ဤ blog post မှ link ကို. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/left-luggage-locations-italy/ ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
europetravel eurotrip leftluggage longtrainjourneys သေတ္တာ ရထားခရီးသွား travelitaly